Tabaha wax sawiridda: tabaha ugu fiican iyo tabaha aad barato sida wax loo sawiro | Hal-abuurka khadka tooska ah
xeelado lagu sawiro
Sawir-qaadashadu had iyo jeer waxay ahayd ilaa dad aad u yar, dhab ahaantii Farsamada sawirku waa farsamo u baahan sannado iyo sannado dabagal iyo ku celcelin ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dad kale oo ku dhashay ruux faneed oo awood u leh inay sameeyaan sawiro soo jiidasho leh.
Maqaalkan waxaan u nimid inaan kaala hadalno wax ku saabsan sawirka ama farshaxanka sawiridda, wax kasta oo aad rabto inaad wacdo, laakiin sidoo kale si aan ku siiyo talooyin iyo tabaha qaar si, habkan, sawirku dhib kugu noqon maayo. Haddii aad rabto inaad barato sawir-qaadista, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad la socotid ama aad u fiirsato, sababtoo ah hubaal waxaad xiisayn doontaa inaad ogaato waxa ka dambeeya sawir wanaagsan.
1.1 noocyada sawiridda
2 Khiyaamooyinka lagu barto sida loo sawiro
2.1 Daawo casharrada oo baro
2.2 Waqtigu waa lacag
2.4 Hel dhiirrigelin
2.5 U sawiro deegaankaaga
2.6 ha niyad jabin
2.7 maktabadaada ugu fiican
Sawirka waxaa lagu qeexaa in ka badan ama ka yar midna sida farsamada ama dhaqanka sawiridda. Marka aan sawireyno, waxaan dib u abuureynaa nooc sawir ah oo taageero ah oo badanaa ah warqad ama shiraac. Sawir-qaadiddu waxa ay dhalatay iyada oo ujeedadu tahay in ay noqoto hab lagu cabbiro garaafyada waana qayb ka mid ah waxa aan u naqaanno fanka muuqaalka ah. Sawirku ma ahayn oo kaliya qayb ahaan habka tarjumaada, laakiin waa isgaadhsiinta. Haddaba si aan u ogaano ereygan waa in aan dib u noqonno kumanaan iyo kumaankun sano, gaar ahaan waagii hore ee taariikhda, markii godadku ay sawiraan calaamado taxane ah si ay u awoodaan in ay la xiriiraan.
Shaki la'aan, sawiradu waxay soo galeen aduunka ujeedaduna tahay in dib loogu abuuro luqadda lagu hadlo si ka aamusan, kooban oo kooban. Af sidaan hore u soo sheegnay ka gudbay taariikhda bini’aadmiga oo ku guulaystay inuu soo jiito dareen, fakar, dareen iyo fikrado badan. Taasi waa sababta sawirku u kala qaybsan yahay qaybo badan oo mid kastaa leeyahay astaamo kala duwan. Marka xigta, waxaan u sharaxnaa si kooban.
Sawirka farshaxanku waa sawir halkaas oo dhammaan shucuurta fannaanka lagu qabtay shiraac. Inta lagu jiro habka abuurista sawir-qaadista, qaybo iyo qaybo kala duwan ayaa loo fuliyaa horumarinteeda: aragtida iyo qalabka. Waa nooc sawir ah oo u baahan isticmaalka qalabyo kala duwan, sidaas darteed, waxaa jira qayb weyn oo qalin ama calaamado kuwaas oo loogu talagalay nooc kasta oo kale oo sawir ah. Sawirka farshaxanka, xariiqda garaafka ayaa loo qaataa tixraaca ugu muhiimsan, maadaama ay aad muhiim u tahay.
Sawirka farsamada waxaa loo isticmaalaa gaar ahaan si loo abuuro matalaad meelo kala duwan. Tusaale ahaan, waxay aad ugu badan yihiin in lagu arko qaybta naqshadaha ama naqshadaha muuqaalka. Waa sawiro u baahan qiime muuqaal ah oo aragtidu ay aad u joogto. Sidaa darteed, qoraagu waa inuu leeyahay aqoon ku filan oo uu ku ogaan karo mid kasta oo ka mid ah cabbirrada shay. Waxa kale oo la iftiimiyay in sawir-gacmeedka farsamada loo kala saaray afar nooc ama nooc: dabiici, joogto ah, warshado iyo qeexid.
Sawirka laftiisa ayaa sidoo kale loo kala saari karaa afar kooxood oo hoosaadyo kale: sawirka ra'yiga, sawirida qeexida, sawirka wax soo saarka ama ugu dambayn, sawir warshadeed.
Khiyaamooyinka lagu barto sida loo sawiro
Waxaa jira farsamooyin taxane ah ama talooyin kaa caawin kara inaad hagaajiso farsamadaada sawir-qaadista, qaarkood ayaa laga yaabaa inay kuugu muuqdaan kuwo cad, laakiin dhab ahaantii laguma xisaabtamo markaad bilaabayso sawir-qaade waxayna aad muhiim u tahay, maadaama ay sameeyaan. qayb ka mid ah geeddi-socodka iyo horumarinta farshaxan ahaan.
Daawo casharrada oo baro
Waxaa laga yaabaa inaysan kuu ahayn khiyaano aad u xiiso badan ama muhiim ah, laakiin 85% waxa aad sawirto maanta waa 99% wax kasta oo aad shalay diiwaangelisay. Weedhan aad bay muhiim u tahay in la dabaqo, maadaama dad aad u tiro yar ay doorteen kanaalka macluumaadka ama dhiirigelinta. Waxaan kugula talineynaa ka hor intaadan bilaabin sawir-qaadista, naftaada u xaji rabitaankaaga oo ku hubso dulqaadka ka hor inta aanad daawan muuqaalo taxane ah oo kaa caawin doona inaad dhiirigeliso oo aad bilowdo. Waxa ugu horreeya oo dhan, ogow sida loo bilaabo adduunkan, tilmaamaha ay tahay inaad raacdo iyo talada ugu muhiimsan ee laga gudbo.
Taasi waa sababta aan kugu dhiirigelineyno inaad raadiso You Tube, waxaad ka heli doontaa kumanaan iyo kumaankun casharro iyo muuqaallo sawir-qaadayaal ah oo iyaguna bilaabay oo kugula talin doona sida ugu fiican.
Waqtigu waa hab ka mid ah nolosheena waana wax walba. Marka hore wakhtigu wuu socdaa. Taasi waa sababta ay lagama maarmaanka u tahay inaad waqti u hurto maalinta, qiyaastii 3 ilaa 4 saacadood maalin kasta. Looma baahna in la raaco, waxaad samayn kartaa waqtiyo nasasho oo aad sii wadeyso jimicsigaaga saacado kadib.
Waxa aan isku dayno in aan kugula talino waa in aadan weligaa joojin sawirka, sababtoo ah marka aan joojino hab-socodka toosan, maskaxdeenu waxay noqotaa mid ka raaxaysata sida caadiga ah waxayna u egtahay inayna dib u dhigin. Sababtan awgeed, sawir-qaadiddu waa jimicsi halkaas oo horumar looga baahan yahay, horumarkuna wuxuu qaataa waqti iyo saacado tababar.
Abuur waa eray ka soo jeeda macnaha dhisidda wax aan hore loo samayn ama ugu yaraan la isku dayo. Tani waa waxa dhacaya markaad bilawdo adduunka farshaxanka, farshaxanku wuxuu u janjeeraa inuu abuuro. Si tan loo sameeyo, waa inaad tijaabisaa oo aad ka tagtaa cabsidaada. Cabsidu waxay weligeed ahayd wax aan la socon fanaaniinta ugu fiican. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaadan ka baqin inaad abuurto oo tijaabiso, isku day in aad sameyso wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca (si farshaxanimo ahaan) oo naftada u billow si aad u ogaato waxa aad awood u leedahay in aad samayso, markaas uun ayaad ogaan doontaa nooca sawirku yahay midka kugu habboon.
Dhiirrigelintu waa saaxiibka ugu fiican ee fannaaniinta, sababtoo ah waa wax kasta oo ka dhigaya inay abuuraan oo ay gaadhaan yoolal cusub. Laakiin si aad u hesho dhiirigelin waa in aad xogogaal u noqotaa, mana aha in aan rabno in aan kuu soo qorno heeso madadaalo ah, laakiin waxaan rabnaa in aad naftaada ku qorto fannaaniinta kale kuwaas oo u shaqeeya labadaba fikrado kala duwan iyo kuwo la mid ah. Waxaa jira fanaaniin helay ilo dhiirigelin mashruucyo ama xubno ku hareeraysan oo aan shaqo ku lahayn sawirista, Waxay si fudud u beddelaan fikirka oo ay u beddelaan fikrado cusub, iyaga oo la qabsanaya isla warbaahinta.
U sawiro deegaankaaga
Deegaanku waa wax kasta oo inagu xeeran. Taas awgeed, waxaa muhiim ah in aan xisaabta ku darno oo aan sawirno, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in aan jawaabo ka helno. Farshaxanno badan ayaa marka ay bilaabaan ma garanayaan waxa ay sawiraan ama meel ay wax ka bilaabaan. Waa muhiim inaad ka tagto shiraac ama xaashida wax yar oo aad daaqadda ka eegto ama hareerahaaga eegto, meel kasta oo aad joogto.
Talo kale oo tan la mid ah ayaa ah in aad aado deegaan aad ku dareemayso raaxo sababo kala duwan dartood oo aad dareenkaas ku qabsato hab cusub oo aad naftaada ku heli karto. Faahfaahintaani aad bay muhiim u tahay sababtoo ah waxay noqon doontaa qayb ka mid ah geeddi-socodka horumarkaaga, oo xusuusnow in horumarku uu la mid yahay goobada aan dhammaanayn. Markaad u baahato inaad dib ugu laabato, ku noqo meeshaad joogtay.
ha niyad jabin
Sida aan horay u soo sheegnay, sawirku waa habraac. Waxaa jiri doona maalmo aad rabto inaad sawirto adigoon joogsan, maskaxdaada waxaa ka buuxa fikrado waxaana jiri doona maalmo aad gasho. waxa ay fanaaniin badani u yaqaanaan xannibaad maskaxeed ama burbur maskaxeed. Ha niyad jabin haddii tani dhacdo sababtoo ah waa wax iska caadi ah, run ahaantiina waa marxalad kale. Waxa dhacaya mar haddii ay tahay marxalad aan faa’iido inoo lahayn, inta badan lama xidhiidhinno masraxa ee waxa aynu ku lamaansanay qarow.
Marka aad leedahay xannibaad maskaxeed ku noqo isla habkii oo kale oo is weydii sida aad ugu suurtagashay in aad horay u socotid. Jawaabtaasi waxay ahaan doontaa dhammaan hababkii aad soo martay, mana dhibayso inaad dib u xasuusato oo aad abuurto su'aalo iyo jawaabo cusub. Shaki la'aan, ha ka welwelin wajigan, ka dibna kaliya waxa ugu fiican ayaa hadhay.
maktabadaada ugu fiican
Waxay yiraahdeen buug ayaa wax ka beddeli kara adduunka, mana sugin sababtoo ah waxaa jira buugag xitaa nolosha beddelay. Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad akhrido oo aad naftaada ka diiwaan geliso dhexdhexaadin dheeraad ah. Ma jiro wax la mid ah furitaanka buug markii ugu horeysay, sababtoo ah waa kan ugu horreeya ee aad had iyo jeer xasuusan doonto. Sidaa darteed, ka raadi intarneedka buugaagta ugu habboon oo aad adoon ka fikirin ama si qarsoodi ah u tag maktabadda kuugu dhow ama dukaanka kuugu dhow oo iibso.
Baadh, akhri oo sawir, ma jiraan wax ka fiican oo sidaas ah.
Sawir-qaadiddu waa farsamo farshaxan oo la fulinayey tobannaan sano. Markaa waa in aynu dib ugu noqonaa bilawgii taariikhda bini’aadmigu si aynu u ogaano talaabooyinkiisa ugu horeeya. Sidaa darteed, waxaan rajaynaynaa in talooyinkan aanu soo jeedinay ay kaa caawiyeen inaad wax barato oo kugu dhiiri galiyaan inaad rabto inaad si buuxda u gashid aduunkan.
Maalin kasta waxaa jira farshaxanno badan oo ku xira sawir-qaadista oo u beddela shaqooyin farshaxan oo run ah. Waxaad noqon kartaa mid iyaga ka mid ah, kaliya sii wad horumarka oo waligaa ha joojin sawirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » xeelado lagu sawiro